समाचार | Samaj Khabar
बागलुङ । बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकामा जिप दुर्घटना हुँदा ४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर घाइते भएका छन्... काठमाडौंका खाल्डो: आज पुर्‍यो भोलि उस्तै
काठमाडौं । उपत्यकाका सडकका खाल्डा ग्राभेलमात्र हालेर पुर्दा भोलिपल्ट उस्तै अवस्थामा परिणत हुने गरेका छन्। कतिप... प्रत्येक नेपालीको टाउकामा २४ हजार राष्ट्रिय ऋण
काठमाडौं । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २४ हजार ऋण पुगेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर... क्रिश्चियन संस्थाले बनाएको १० लाखका घर खोरजत्रा !
गोरखा । क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस (सीआरएस) ले १० लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाएको खोरजत्रो घरको आलोचना भएपछि केही ठूलो घ... सर्वोच्चले विशेष अदालतको मुद्दाको मिसिल मगायो
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चुरामणि शर्मा प्रकरणमा विशेष अदालतको मुद्दाको मिसिल मगाउन आदेश दिएको छ । आन्तरिक र... नुवाकोटमा ५ हजार ८ सय ४९ घरको पुनःनिर्माण
नुवाकोट । बिनाशकारी भूकम्पले क्षति पु¥याएका आवासमध्ये नुवाकोटमा बल्ल पाँच हजार आठ सय ४९ घरको पुनःनिर्माण भएको... दुई हजार थान लागुऔषध सहित दुई पक्राउ
काठमाडौं । हरीले दुई हजार ३६७ थान लागुऔषध एम्पुलसहित दुई जनालाई आज पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरी, लागुऔषध नियन... बागलुङको बडिगाडमा जिप दुर्घटना, चारको मृत्यु, छ घाइते
on: बागलुङ । बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकामा जिप दुर्घटना हुँदा ४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर घाइते भएका छन्। ध१ज १८४ नम्बरको जिप सडकबाट करिब ८ सय मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा...	Read more Share
काठमाडौंका खाल्डो: आज पुर्‍यो भोलि उस्तै
on: काठमाडौं । उपत्यकाका सडकका खाल्डा ग्राभेलमात्र हालेर पुर्दा भोलिपल्ट उस्तै अवस्थामा परिणत हुने गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा सवारीसाधन गुड्दागुड्दै पनि ग्राभेल उक्किने गरेको छ। अहिले कामचलाउका रूप...	Read more Share
प्रत्येक नेपालीको टाउकामा २४ हजार राष्ट्रिय ऋण
on: काठमाडौं । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २४ हजार ऋण पुगेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३र७४ मा सरकारका नाममा ६४ अर्ब २२ करोड ऋण थपिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा अच्...	Read more Share
क्रिश्चियन संस्थाले बनाएको १० लाखका घर खोरजत्रा !
on: गोरखा । क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस (सीआरएस) ले १० लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाएको खोरजत्रो घरको आलोचना भएपछि केही ठूलो घर बनाउन थालेको छ। परिमार्जित १६ वटा घर पनि आलोचनामुक्त भने भएका छैनन्। बुंकोटमा...	Read more Share
सर्वोच्चले विशेष अदालतको मुद्दाको मिसिल मगायो
on: काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चुरामणि शर्मा प्रकरणमा विशेष अदालतको मुद्दाको मिसिल मगाउन आदेश दिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्...	Read more Share
on: नुवाकोट । बिनाशकारी भूकम्पले क्षति पु¥याएका आवासमध्ये नुवाकोटमा बल्ल पाँच हजार आठ सय ४९ घरको पुनःनिर्माण भएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय नुवाकोट अन्तर्गतको आवास निर...	Read more Share
on: काठमाडौं । हरीले दुई हजार ३६७ थान लागुऔषध एम्पुलसहित दुई जनालाई आज पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरी, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरबाट खटिएको विशेष टोलीले काठमाडौँ, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका– ७...	Read more Share
चीनको बाटो ओलाङचुंगोला आइपुग्यो
on: काठमाडौं । नेपाल र चीनको सिमाना टिप्ताला भञ्ज्याङवाट सुरु भएको मोटरबाटो शुक्रबार ओलाङचुङगोलामो आइपुगेको छ। ओलाङचुङगोला सिमा प्रहरी चौकी छेउसम्म मोटरवाटोको ट्रयाक खोलिएकोछ। त्यहाँसम्म दुइवटा...	Read more Share
on: काठमाडौं । एक वर्षमा ५० हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका छन्। अध्ययनका लागि भिसा आवेदन गर्दा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा मात्र डे...	Read more Share
on: गोरखा । विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले गोरखाको उहिया र सिर्दिवासका बासिन्दालाई खान मिल्ने खाद्यान्न मात्रै वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उहिया र सिर्दिवासको गोदाममा रहेका ५० बोरा...	Read more Share